दाईजोमा मृगौला ! |
दाईजोमा मृगौला !
प्रकाशित मिति :2015-10-25 13:04:04
कात्तिक, ८ । सुन्दा अनौठो लाग्छ, दाईजोमा मृगौला । श्रीमानको मृगौलाले काम नगर्दा श्रीमतीले आफ्नो बुबासँग मृगौला मागेर बचाउँछन् । तर, श्रीमानले भने श्रीमतीको रोग पत्ता लागे पछि पनि उपचार नगरेका दर्जनौ उदाहरण छन् । घटना काठमाडौ उपत्यकाभित्रकै हो । एउटी महिलाले आफना श्रीमान बचाउन आफना बाबुसँग रोइकराई गरेपछि हालै बाबुले आफनी ‘छोरीको घर जोगाउन ज्वाइँलाई मृगौला’ दान दिएका छन् । पारिवारिक गोपनीयता कायम गर्न उनीहरूले घटनावारे विस्तृतरुपमा बताउन चाहेनन् ।
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका प्रमुख डाक्टर पुकार चन्द्रश्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘लोग्ने बचाउन श्रीमतीले आफनो र माइतीबाट मृगौला उपहार दिएको उदाहरण छ ।’ अहिलेसम्म १५५ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका डा। श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘मृगौला लिने धेरैजसो पुरुष छन् भने दिनेमा महिला । यो लैंगिक रुपमा अत्यन्तै ठूलो विभेद हो ।’ नेपालमा उस्तै आर्थिक अवस्था भएको पुरुषको मृगौला काम लागेन भने उसको उपचार गराइन्छ, तर सामान्यतया महिलाको मृगौलाले काम गरेन भने उपचार गराइदैन ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार, श्रीमानको उपचारका लागि श्रीमतीले घर सम्पत्ति पुरै बेच्ने मात्र होइन आफ्नो माईतबाट समेत खर्च जुटाउने गरेका उदाहरणहरू छन् । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र आरोग्य प्रतिष्ठानले दिएको तथ्यांक अनुसार महिलामाथि हुने विभेदको चर्को र डरलाग्दो अवस्था मृगौला दिने क्रममा पनि देखिएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा । क्षेष्ठका भनाईमा, ‘नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार मनिसको मृगौला बेकम्मा हुन्छ ।तीमध्ये ९० प्रतिशतको ज्यान जानसक्छ ।’ मृगौला काम नलाग्ने हुनेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्याकेहि बढी छ । तर मृगौला बिग्रिएर मर्नेमा भने महिलाको सख्याँ बढी छ ।
मृगौला बिग्रनेमा धेरैजसो २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिस छन् । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मात्र बितेका डेढ वर्षमा मृगौला प्रत्यारोपण गराउने मध्ये ९० प्रतिशत पुरुष र १० प्रतिशत महिला थिए । मृगौला दान गर्नेमा भने ७५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुष थिए । अर्थात्, अङ्गदान गर्नेमा महिला बढी छन् र लिनेमा सबै जसो पुरुष ।
मृगौला दान गर्ने एकजना महिला भन्छिन् ‘लोग्ने बाँचे पो जीवनको अर्थ हुन्छ । होइन भने मेरो के अर्थ ।’ तर नेपालका अधिकांशजसो लोग्ने मानिसहरू ती महिलाका जस्तो धारणा राख्दैनन् ।
महिला र पुरुषबीच देखिएको यस्तो भेदभाव मेटाउन आरोग्य फाउनण्डेसनले महिलालाई मृगौला दिने पुरुषलाई रु।५० हजार दिँदै आएको छ । यो पैसा केन्द्र र आरोग्य प्रतिष्ठानले ब्योहोर्दै आएका छन् ।
आरोग्यले यसरी पैसा दिन थालेपछि डेढ महिनामा दुई जना महिलाले पुरुषबाट मृगौला पाएका छन् । मानिसमा चेतना जगाउन र महिलामाथि हुने भेदभाव हटाउन आरोग्यले यस्तो अभियान थालेको हो .
प्रकाशित मिति २०७२ कात्तिक ८ गते आइतवार